Kedu otu na mgbe ị ga-ahụ Northern Light nke Norway | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu otu na mgbe ị ga-ahụ Northern Light na Norway
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ niile anụtụla ma ọ bụ hụ aurora borealis na foto. Othersfọdụ ndị ọzọ enweela obi ụtọ iji hụ ha na mmadụ. Mana ọtụtụ amaghị etu esi akpụbe ha na ihe kpatara ya. Otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa iji hụ aurora borealis bụ Norway. Ya mere, ọ ghọrọ ebe nlegharị anya dị elu iji hụ ihe omume a mara mma nke okike.
Aurora borealis amalite na-egbukepụ egbukepụ na mbara igwe. Mgbe ahụ ọ na-ebelata ma ọkụ na-enwupụta na-ebili nke na-emechi mgbe ụfọdụ na gburugburu na-enwu gbaa. Ma olee otu esi hiwe ya na ihe ọrụ ya nwere? Chọrọ ịma ihe niile gbasara Northern Light nke Norway?
3 Mmetụta nke aurora borealis
4 Northern ọkụ na Norway
5 Mgbe ị pụrụ ịhụ
Enwere ike ihu ọkụ ugwu site na gburugburu okirikiri nke Earthwa. Ha sitere na Anyanwu. E nwere bombardment nke subatomic ahụ si Sun guzobere na anyanwụ oké ifufe. Ngwurugwu ndị a sitere na-acha odo odo na-acha uhie uhie. Ifufe nke anyanwụ na-agbanwe mkpụrụ ahụ ma mgbe ha zutere mpaghara ndọta ụwa, ha na-agbagọ ma naanị akụkụ ya ka a hụrụ na okporo osisi.
Elektrọn ndị mejupụtara radieshon nke anyanwụ na - ewepụta ọpụpụ spectral mgbe ha ruru irighiri gas dị na ndọta (akụkụ nke ikuku ụwa nke na-echebe Earthwa site na ikuku nke anyanwu, ma mee ka obi di uto na onu ogugu nke na-eme ka mmadu ghara inwe. Lumgha ahụ na-agbasa na mbara igwe, na-eme ka a na-ekiri okike.
Ọ bụrụ na ihe okike pụtara na mpaghara ndị dị nso na mgbago ugwu, a na-akpọ ya aurora borealis. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ọ ga-eme na mpaghara dị nso na pole nke ndịda, a na-akpọ ya south aurora. Ha na-ewere ọnọdụ na ọnwa nke Septemba na Ọktọba na Machị na Eprel. N'oge ndị a enwere ọrụ ka ukwuu nke oghere anwụ.
Ebe kachasị mma iji hụ ha nọ Norway, Sweden, Finland, Alaska, Canada, Scotland na Russia. Enwere ike igosi ya n'ụzọ ụfọdụ dị ka isi nke ọkụ, ọnya na ntụpọ ahụ ma ọ bụ jiri akụkụ okirikiri. Ha nwekwara ike inwe agba dị iche iche site na ọbara ọbara ruo edo edo, site na acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mmetụta nke aurora borealis
Ihe omume a, nke ewepụtara site na mgbanwe na mberede na ndọta magnet, na-agbada ike dị ukwuu na-abanye na ụwa anyị. N'otu aka, ọ na-enye anyị ọmarịcha mmemme anwansị na nke pụrụ iche, mana n'aka nke ọzọ, ọ na-emetụta anyị n'ụzọ na-adịghị mma.
Ifufe nke anyanwụ na-abanye na mbara ala anyị na-emepụta nnyonye anya na mgbasa ozi (emetụta akara telivishọn, telephony, satellites, rada na sistemụ kọmputa dị iche iche). Nke a na - eme ka nkwukọrịta kwụsị, mana ọ nweghị mgbe ọ bụ ihe egwu nye mmadụ.
Northern ọkụ na Norway
Dị ka e kwuru na mbụ, Norway bụ otu n'ime ebe kachasị mma n'ụwa iji hụ aurora borealis. Ọ bụ mpaghara ebe ị nwere ike ịhụ ihe omimi a na nke anwansị dị mfe.
Enwere ọtụtụ akụkọ mgbe ochie n'ihi ihe okike a, dịka akụkọ akụkọ Viking nke gbasara Northern Light na echiche nke ọta nke ndị dike Valkyrie.
Agbanyeghi na enwere ike ihu ya site n'akụkụ dị iche iche nke mba ahụ, a hụrụ ebe kachasị mma karịa Arctic Circle na Northern Norway. Karịsịa ị pụrụ ịhụ auroras eriri site na Lofoten Islands ma na-aga n'ihu n'ụsọ oké osimiri na North Cape.
Ebe ndị a dị mma iji hụ ebe Ọwụwa Anyanwụ atwa kachasị mma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnọ n’elu ala, anyị nwere ohere ka mma na ihu igwe akọrọ ma enweghị ike iji anya anyị hụ ya. Oke osimiri nwere uru ya, agbanyeghị. Ma ọ bụ na ifufe na-agakarị ma nwee ike ịhapụ mbara igwe nke nwere ọhụụ ka ukwuu.
Mgbe ị pụrụ ịhụ
Ọ bụ ezie na Norway bụ mpaghara ebe a na-ahụkarị ọkụ Northern, ọ pụtaghị na anyị nwere ike ịmata ụbọchị, ebe na oge ebe ọ ga-eme. Ohere dịkarịsịrị ukwuu dị ka oge mgbụsị akwụkwọ na opupu ihe ubi, ya bụ, n'etiti Septemba 21 na March 21.
Nchere niile nwere ụgwọ ọrụ ya. The "n'ebe ugwu ọkụ" agbasaghị na-ugboro ugboro na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ na oyi oge. Ya mere, ọnwa kachasị mma iji debe ha bụ Ọktọba, Febụwarị na Machị. N’ọnwa ndị a, abalị abalị na-adị ogologo ma ụbọchị ejiri nwayọ na-eto.
Ihe na-ekpebi ya mgbe ị na-ahụ ihe ịtụnanya a bụ ọnọdụ ihu igwe dị ugbu a. Tupu ị na-eme atụmatụ njem na Norway, ọ dị mkpa ka ị mara ọnọdụ ihu igwe nke ga-ewere ọnọdụ na-abịa ụbọchị. Ọ bụrụ na amụma mmiri ozuzo, ị meela njem n'efu. Iji zere ụdị ọnọdụ a, enwere ụfọdụ mmiri ozuzo mkpu ngwa na-eme ka ị mara banyere mmiri ozuzo a ga-enwe na mpaghara ebe ị ga-aga.
Ọ bụrụ n'ikpeazụ ị jisiri ike ịhụ Ugwu Ugwu, ọ ga-abụrịrị na ọ bara uru. Ọ bụ ihe ngosi dị egwu n'ụzọ niile. Ndị bi na Northern Norway nwere Northern Light dị ka akụkụ nke ndụ ha. N'agbanyeghị nke ahụ, ha na-abụ ihe mmụọ nsọ maka ndị na-ese ihe, akụkọ ifo na akụkọ ifo. Ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na njedebe nke Northern Lights abịawo na njedebe na anyị ga-ahụ obere na obere. Ya mere, ọ dị mkpa iji ohere nke ịhụ ihe ịtụnanya ndị a tupu ugboro ole ha pere mpe pere mpe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu otu na mgbe ị ga-ahụ Northern Light na Norway
Kedu ihe bụ na otu esi amalite ifufe na àmụmà?